Duplicate Yemukati Zvekurangwa: Iyo Manyepo, Ichokwadi, uye Rangu Mazano | Martech Zone
Duplicate Yemukati Zvekurangwa: Iyo Manyepo, Icho Chaicho, uye Zano Rangu
China, Kurume 25, 2021 Chipiri, August 24, 2021 Douglas Karr
Kwerinopfuura makore gumi, Google yanga ichirwira ngano yeiri dupiki yezviri mukati. Sezvo ini ndichiri kuenderera mberi kumisikidza mibvunzo pairi, ndakafunga kuti zvingave zvakakodzera kukurukura pano. Kutanga, ngatikurukurei nezve verbiage:
Chii Duplicate Zvemukati?
Zvinyorwa zvakapetwa kazhinji zvinoreva mabhureki ezvimukati mukati kana munzvimbo dzakatarisana dzinoenderana nezvimwe zvirimo kana zvakafanana zvakafanana. Kunyanya, izvi hazvisi zvekunyengera mune Chibviro.
Google, Dzivisa Duplicate Zvemukati
Chii Chiri Chiri Chiri Mukati Rirango?
Chirango chinoreva kuti saiti yako haichakwanise kunyorwa mumhedzisiro yekutsvaga zvachose, kana kuti ako mapeji akaderedzwa zvakanyanya mukumisikidzwa pane mamwe mazwi akakosha. Hakuna. Nguva. Google vakabvisa ngano iyi muna 2008 zvakadaro vanhu vachiri kuzvikurukura nanhasi.
Ngatiisei izvi pamubhedha kamwe chete uye zvachose, vanhu: Hapana chinhu chakadai se "duplicate yemukati chirango." Zvirinani, kwete nenzira iyo vanhu vazhinji vanoreva pavanotaura izvozvo.
Google, Kuratidzira iyo Duplicate Yemukati Yemukati Chirango
Mune mamwe mazwi, kuvapo kwezvinhu zvakapetwa pane yako saiti hakuite kuti saiti yako irangwe. Iwe uchiri kugona kuratidzira mumhedzisiro yekutsvaga uye uchiri kunyatso rongedza zvakanaka pamapeji ane zvakapetwa zvemukati.
Nei Google Ichida Kuti Iwe Udzivise Zvinyorwa Zvekuita?
Google inoda mukana wepamusoro wevashandisi muInjini Yadzo yekutsvaga uko vashandisi vanowana ruzivo rwekukosha nekudzvanya kwese kwekutsvaga kwekutsvaga. Duplicate zvemukati zvinogona kukanganisa icho chiitiko kana iyo yepamusoro gumi mhedzisiro pane yekutsvaga injini mhinduro peji (SERP) yaive nezvakanyorwa zvakafanana. Zvinenge zvichishungurudza mushandisi uye iyo yekutsvaga injini mhedzisiro yaizopedzwa nemakambani eBhathat SEO achingovaka mapurazi ezvinyorwa kutonga mitsva yekutsvaga.
Duplicate zvemukati pane saiti hazvisi zvikonzero zvekuita pane saiti kunze kwekunge zvichiratidzika kuti chinangwa cheduplicate zvemukati ndechekunyengera uye nekushandisa mitsva yekutsvaga injini. Kana yako saiti ichinetseka nemhando mbiri dzezvinhu zvemukati… tinoita basa rakanaka rekusarudza vhezheni yezvirimo kuratidza mumhedzisiro yedu yekutsvaga.
Google, Dzivisa Kugadzira Duplicate Zvemukati
Saka hapana chirango uye Google inosarudza vhezheni yekuratidza, saka nei iwe uchifanira dzivisa zvakapetwa zvirimo? Kunyangwe usiri kurangwa, iwe gona uchiri kukuvadza kugona kwako kuzviisa nani. Heino chikonzero:
Google ingangoenda ratidza peji rimwe chete mumhedzisiro… Iye ane masimba akanaka kuburikidza ne backlinks uyezve anozovanza zvimwe zvese kubva pamhedzisiro. Nekuda kweizvozvo, iko kuedza kunoiswa mune mamwe maratidziro emapeji emapeji kungori dongo kana zvasvika pakutsvaga injini chinzvimbo.
Chikamu chepeji rega rega chakanyanya kutsamira pane iyo akakodzera backlinks kwavari kubva kunzvimbo dzekunze. Kana iwe uine mapeji matatu ane zvakafanana zvemukati (kana nzira nhatu kune iyo peji imwechete), unogona kunge uine backlinks kune peji rega rega pane ese backlinks anotungamira kune rimwe rawo. Mune mamwe mazwi, urikukuvadza kugona kwako kuti uwane peji rimwe rinounganidza ese backlinks uye chinzvimbo chiri nani. Kuve uine imwechete peji chinzvimbo mune yepamusoro mhedzisiro kuri nani kupfuura mapeji matatu ari papeji 3!
Mune mamwe mazwi… kana ndine mapeji matatu ane zvakapetwa zvemukati uye rimwe nerimwe rawo riine 3 backlinks yega yega… hazvimiriri uye pamwe chete peji rimwe rine 5 backlinks! Zvinyorwa zvakapetwa zvinoreva kuti mapeji ako ari kukwikwidzana uye anogona kunge achikuvadza iwo ese pane kuisa peji rakakura, rakanangwa.
Asi Isu Tine Zvimwe Zvakapetwa Zviri Mukati Mapeji, Zvino Chii?!
Zviri zvechisikigo kuva nezvakadzokororwa zvemukati mukati mewebhusaiti. Semuenzaniso, kana ndiri kambani yeB2B ine masevhisi anoshanda mumaindasitiri mazhinji, ndinogona kuve nemapeji akanangwa neindasitiri yebasa rangu. Ruzhinji rwerondedzero yeiyo sevhisi, mabhenefiti, zvitupa, mitengo, nezvimwe zvinogona kunge zvakafanana kubva kune rimwe bhizimusi peji kuenda kune rinotevera. Uye izvozvo zvine musoro!
Hausi kunyengedza pakunyorazve zvemukati kuti uzvienzanise nevevanhu vakasiyana, inyaya inogamuchirwa nyora zviripo. Heano zano rangu, zvakadaro:
Shandisa Yakasarudzika Peji Mazita - Rangu zita remusoro, ndichishandisa muenzaniso uri pamusoro, waizosanganisira sevhisi neindasitiri iyo peji yakanangiswa.
Shandisa Yakasarudzika Peji Meta Tsananguro - Meta tsananguro dzingave dzakasarudzika uye dzakanangwa zvakare.
Sanganisa Zvakasarudzika Zvemukati - Kunyange hombe swuru dze peji dzingave dzakadzokororwa, ini ndaizosanganisira iyo indasitiri mumisoro mikuru, mifananidzo, madhayagamu, mavhidhiyo, zvipupuriro, nezvimwewo kuona kuti chiitiko chakasarudzika uye chakanangiswa kune vateereri.
Kana iwe uchipa chikafu maindasitiri masere nebasa rako uye uchiisa aya mapeji masere ane akasarudzika ma URL, mazita, meta tsananguro, uye yakakura chikamu (hutumbu hwangu husina data i8%) yezvinyorwa zvakasarudzika, hausi kuzomhanya chero njodzi yeGoogle kufunga kuti urikuyedza kunyengedza chero munhu. Uye, kana iri peji rakagadzirwa zvakanaka rine zvinongedzo zvine chekuita ... iwe unogona kumisikidza mushe pane mazhinji acho. Ini ndinogona kutosanganisa peji remubereki neinotarisa iyo inosundidzira vashanyi kuma-sub-mapeji eimwe indasitiri.
Ko Ko Kana Ndichingochinjisa Kunze Kweguta Kana Maseru Eruwa Kune Geographic Targeting?
Mimwe mienzaniso yakaipisisa yezvinyorwa zvidhori zvandinoona mapurazi eSEO anotora uye anodzokorora mapeji kune yega nzvimbo yenzvimbo chigadzirwa kana sevhisi inoshanda mukati. Ini ndakashanda nemakambani maviri edenga izvozvi izvo zvaive nevekare SEO varairidzi vanovaka kunze kweguta rakawanda- centric mapeji uko ivo vakangotsiva iro zita reguta mune iyo musoro, meta tsananguro uye zvemukati. Izvo hazvina kushanda… iwo ese mapeji akaverengwa zvisina kunaka.
Seimwe nzira, ini ndakasimudza tsoka yakafanana yainyora maguta kana matunhu avakashandira, ndokusimudza peji rebasa rine mepu yenharaunda yavakashandira, ndokuendesa mapeji ese eguta kune peji rebasa… uye kuwedzera ... sevhisi peji uye mapeji enzvimbo yebasa ese ari maviri akakwidzwa mudenga.
Usashandise zvinyorwa zvakapusa kana kutsiva zvemapurazi zvemukati kutsiva mazwi mamwechete seizvi ... urikukumbira dambudziko uye harishande. Kana ndiri mupfuri wedenga unofukidza maguta gumi nemana… ndoda kunge ndine backlinks uye zvitaurwa kubva kunzvimbo dzenhau, nzvimbo dzekudyidzana, nenzvimbo dzenzanga dzinonongedza kune yangu imwechete peji rekudenga. Izvo zvichaita kuti ndiverengerwe uye hapana muganho kune mangani maguta-sevhisi yekubatanidza mazwi akakosha andinogona kurongedza neine peji rimwe chete.
Kana yako SEO kambani inogona kunyora purazi rakadai, Google inozviona. Icho chinonyengera uye, mukufamba kwenguva, chinogona kutungamira kwauri kuti utore kurangwa.
Ehe, pane izvo zvinosara. Kana iwe waida kugadzira akawanda enzvimbo mapeji ayo aive akasarudzika uye akakodzera zvemukati mukati kuti ushandise ruzivo, izvo hazvisi zvinonyengera ... izvo zvakagadzirirwa. Muenzaniso unogona kunge uri wekushanya kweguta… uko sevhisi kwakafanana, asi pane musiyano wezviitiko munzvimbo ino zvinogona kutsanangurwa mumifananidzo uye tsananguro.
Asi Ko Zvakadii Nezana zana% Asina mhosva Duplicate Zvemukati?
Kana kambani yako ikaburitsa chishambadziro, semuenzaniso, icho chakatenderera uye chakaburitswa pamasaiti akawanda, iwe ungangoshuva kuzviburitsa pane yako saiti zvakare. Tinozviona izvi kazhinji. Kana, kana iwe ukanyora chinyorwa pane hombe saiti uye uchishuvira kuchidzorera icho chako saiti. Heano mamwe maitiro akanakisa:
Canonical – A canonical link is a metadata object in your page that tells Google that the page is duplicate and they should look at a different URL for the source of the information. If you’re in WordPress, for example, and wish to update a Canonical URL destination, you can do this with the Rank Masvomhu SEO plugin. Add the originating URL in the canonical and Google will respect that your page isn’t duplicate and the origin deserves the credit. It looks like this:
Dzorera zvakare - Imwe sarudzo ndeye kungo dzorera imwe URL kunzvimbo yaunoda kuti vanhu vaverenge uye mainjini ekutsvaga. Iko kune kazhinji nguva dzatinobvisa zvakapetwa zvemukati kubva pawebhusaiti uye isu tinonongedzera ese mapeji epasi-epamusoro kune epamusoro-chinzvimbo peji.
Noindex - kumaka peji kune noindex uye kusaburitsa kubva kumainjini ekutsvaga kuchaita kuti injini yekutsvaga isateerere peji uye irambe iri kunze kwekutsvaga injini. Google inopa zano pamusoro peizvi, ichiti:
Google haikurudzire kuvhara chinokambaira kuwana zvakapetwa zviri pawebhusaiti yako, kungave kuri ne robots.txt faira kana dzimwe nzira.
Kana ini ndiine mapeji maviri akanyatsodzokororwa, ini ndoda kushandisa canonical kana kuendesa zvakare kuitira kuti chero backlinks kune peji rangu ipfuudzirwe kune yakanakisa peji, hazvo.
Ko Ko Kana Mumwe Munhu Achiba Uye Achidzokororazve Zvemukati Zvako?
Izvi zvinoitika mwedzi mishoma yega yega neyangu saiti. Ini ndinowana zvitaurwa nezvangu nesoftware yangu yekuteerera uye ndoona kuti imwe saiti iri kutsikirazve zvemukati zvangu seyavo. Iwe unofanirwa kuita zvishoma zvinhu:
Edza kubata saiti kuburikidza yavo yekutaurirana fomu kana email uye ukumbire kuti ibviswe ipapo ipapo.
Kana vasina ruzivo rwekutaurirana, ita duraiti Whois tarisa uye bata vanofambidzana mune yavo dhata rekodhi.
Kana vaine zvakavanzika munzvimbo yavo yedomeini, bata wavo wekutambira mupi uye uvazivise mutengi wavo ari kutyora kodzero yako.
Kana ivo vachiri vasingateedzere, bata vashambadzi vesaiti yavo uye uvazivise kuti vari kuba zvemukati.
Faira chikumbiro pasi pe Digital Millennium Copyright Act.
Kana iwe uchingo chengeta mupfungwa kuti SEO ndeye zvese nezve mushandisi ruzivo uye kwete imwe algorithm yekurova, mhinduro iri nyore. Kunzwisisa vateereri vako, kuzviita kana kuganhura izvo zvemukati kuti ubatanidzwe zvakanyanya uye kukosha iwo maitiro akanaka. Kuedza kunyengedza algorithms chinhu chinotyisa.
Tags: canonicalmapeji egutaCounty mapejinyora zviripoduplicate zvemukati chirangoyemuno seonzvimbo-based mapejinzvimbo dzakawandamultilocationnhemanoindexorganic searchorganic yekutsvaga chinzvimbochepamusoroRobots.txtseoseo maitiro akanakaseo nganokuba zvemukati
Chii chiri 404 Kanganiso Peji? Nei Zvakakosha Kwazvo?